“ပြည်သူချစ်သော ဘလော့သည်များ” ဆိုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးအုံးဗျာ။ လူထုပန်ဒိုရာ…ပေါ့။
i luv it.\_o/
ကဲ…. လက်ညိုးကလေး တချက် ကလစ် ရောက်လိုက်တာနဲ့ ကဗျာကောင်းလေးတပုဒ် စင်ပေါ်ရောက်နေတာကို ကြုံရပြန်ပါပြီကော…..
မာမာအေးသီချင်းထဲက စာသားလေးတခုကို သတိရတယ်။
“သူငိုရင် ပုလဲ၊ သူရီရင် ရွဲ ဖြစ်သတဲ့ကွယ်…..”
ကဲကဲ…ပရိသတ်ကြီးရေ…..ပုလဲယူမလား ရွဲယူမလား။ ပုလဲလိုချင်ရင်တော့ ဘလော့သည်ကို ငိုအောင် စကြပေတော့။ ရွဲလိုချင်ရင် ကလိထိုး။ အဲ…အဲ…စိန်လိုချင်ရင်တော့ သမီးတော်လေးနဲ့ ထိမ်းမြားနိုင်ဘို့ ကြိုးစားရချေမယ်။း-)
သူငိုရင် လိုက်ငို ဘလော့က ဘလော့ဂါရဲ့ စိတ်ကို ဖွင့်ပြထားသလိုပဲနော့် သဘောကျတယ် ကဗျာလေးကို ။
ကချေသည် မဟုတ်တဲ့ ဘလော့သည် ကဗျာရှင်ရေ . . .
ရေးကွက်ရေးဟန်များကို အဖန်တလဲလဲ အသည်းဘ၀င်ခိုက် နှစ်ခြိုက်စွာ ရှုစားမိပါတယ်။
မပန် .. အရုပ်ကြိုးပြတ်စရာ ကြုံရင်လဲ အမြန် ပြန်ဆက်နိုင်ပါစေနော်..
ဒီကဗျာ မဖတ်ခင် ပန်ဒိုရာ ၏ယနေ့ အခြေအနေ ဆိုတာဖတ်ပါ လို့ပြောရတော့မယ့်ကဗျာတစ်ပုဒ်ပ..
သူ slogan က “နံနက်ခင်းမှာသာငါနေထိုင်သည်” လို့ ဆိုတော့ “ည နေခင်း နှင့် ညခင်းများမှာ ငါလဲလျောင်းသည်” လို့ ဒသနိကျကျ တွေးနိုင်ပါတယ်..ဒီလိုဆောင်ပုဒ်ရှင်ဘလော့ဂါ ရေးတဲ့ ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုတော့ “နံနက်ခင်းမှာ ထိုင်နေ” ရင်းဖတ်သွားကြောင်းပါ..ဘယ်အချိန၊ဘယ်လိုပုံနဲ့ ဖတ်ဖတ် ကောင်းနေ၊လှနေမှာပါ။
စကားမစပ်… “ဘလော့သည်” ဆိုတော့ ကုန်သည်၊ဈေးသည်လို အနက်နဲ့ ဘလော့ဂ်ရေးသူ (blogger) လို့ နာမ် အနေနဲ့ဖတ်လို့ ရသလို..တွေ့ တွေ့ ခြင်းတော့ “ဘလော့ရေးသည်” ဆိုတဲ့.အနက်နဲ့ကြိယာ အနေနဲ့(Why do I blog?) လို့ဖတ်မိသွားကြောင်းပါ..ဒီဘလော့ဂ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလဲတွင်ကျယ်လာလိုက်တာ မြန်မာစကားမှာ မွေးစားစကားလုံးတစ်ခု ကိုဖြစ်သွားပါပြီ။ ဘာသာပြန်ဖို့ လဲမလှတော့၊ နောက်ထုတ်မယ့် မြန်မာ အဘိဓာန်မှာထည့်ရတော့မယ့်မွေးစားစကားလုံးအသစ်ပါပဲ။
ကိုအက္ခရ ကြီးပြောသလို လူထု ပန်ဒိုရာ ... :P
whatanice poem! :D
ကောင်းတယ်ဗျာ။ ပန်ဒိုရာကို ပြန်ငိုသာပြလိုက်ချင်တော့တယ်။
ဘလော့သည် တဲ့လား..။ နာမည် ပေးတော်လိုက်တာ
အခုတလော ဒီကဘလော့သည်ကတော့ လက်ညိုးကလေး တချက် ကလစ်ဖို့ ပျင်းပျင်းနေတာရော အလုပ်များနေတာရော။။။